အသားအရေကို အစိုဓာတ်ပြည့်ဝစေပြီး အေးမြစေပါတယ်
Foundation အပေါ်ကနေထပ်လိမ်းရင်တောင်မှ စိမ့်ဝင်မှု မြန်ဆန်ပါတယ်
အစိုဓာတျကို ဖွညျ့တငျး ထိနျးသိမျးပေးနိုငျသော ဒီsprayဟာ ၃%သော rose waterပါဝငျတာကွောငျ့ အသားအရေ ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျးနှငျ့ အသားအရကေို ထိခိုကျလှယျခွငျးမှ လြော့ခသြကျသာစပေါတယျ။ Foundationရဲ့ အပျေါကနေ ထပျပွီးမှ သုံးရငျတောငျ လြှငျမွနျစှာ စိမျ့ဝငျအားကောငျးပါတယျ။ အနံ့အတုမပါဝငျပါဘူး ၊ အသားအရကေို စိုပွစေတေဲ့ panthenol နှငျ့ ဖရဲသီး အဆီအနှဈမြားသာ ပါဝငျပါတယျ။
အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်း ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သော ဒီsprayဟာ ၃%သော rose waterပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် အသားအရေကို ထိခိုက်လွယ်ခြင်းမှ လျော့ချသက်သာစေပါတယ်။ Foundationရဲ့ အပေါ်ကနေ ထပ်ပြီးမှ သုံးရင်တောင် လျှင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်အားကောင်းပါတယ်။ အနံ့အတုမပါဝင်ပါဘူး ၊ အသားအရေကို စိုပြေစေတဲ့ panthenol နှင့် ဖရဲသီး အဆီအနှစ်များသာ ပါဝင်ပါတယ်။
Calming and hydrating prime and care spray. Use before make up or to refresh during the day. Direction: Hold bottle 30 cm away from face and spray evenly.